Ogaden News Agency (ONA) – Taariikhda Halganka Ogaadeenya oo Kooban & Aas Aaskii JWXO.
Taariikhda Halganka Ogaadeenya oo Kooban & Aas Aaskii JWXO.
August 15, 2018, Maanta waxay ku beegan tahay 34 guuradii aas aaska Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeeniya (JWXO), oo la aas aasay August 15, 1984, taas oo xuskeedu ka dhacayo maanta meelo badan oo dunida dacalladeeda ah.
34 sano ka hor mahadi ha ka gaadhee waxaa magaca JWXO sameeyey dhalinyaro wadaniyiin Soomaalida Ogadeeniya kamid ah oo iskood isu xilqaamay, kuwaas oo ka jawaabayay dareenka shacabka Soomaalida Ogadeeniya, xili uu gaabiyay halgankii qori isu-dgiibka ahaa ee xoraynta Soomaalida Ogadenya.
Halganka ku salaysan difaaca iyo xornimada Soomaalida ku hoos dulman Gumaysiga Itoobiya wuxuu bilawday qarnigii 15aad, xilligaas oo ay Abbysinia (Atoobiya) bilowday dhulbalaadhsi ka dhan ah dhamaan shucuubtii ay dariska ahaayeen xilligaas. Xiligaasi wixii ka dambeeyey waxaa ka dhexeeya dadka Soomaalida ah iyo Gumaysigii Itoobiya (Abbysinia) dagaalo ku salaysan qabsasho iyo iska caabin. Gumaysteyaashii reer Yurub ee qabsaday qaarada Afrika, waxay qaarada kaga tageen khilaaf iyo dhibaatooyin xuduuddeed iyo magacbixi caalami noqday markii dambe.
Dadka Soomaaliyeed waa qoys leh hal af, hal dhaqan iyo hal diin degana dhulka ugu wanaagsan Geeska Afrika bad iyo barriba. Gumaysigii reer Yurub waxay dacwad iyo nac balaadhan oo ay u qabeen shacabka Soomaaliyeed ee guud ahaan ku dhaqan Geeska Africa u qaybiyeen shan qaybood, oo qayb walba lasiiyey dal kale si aysan Soomaalidu awood ay cadawgooda iskaga caabiyaan u yeelanin.
Labo ka mid ah shanta qaybood ee Soomaalida loo qaybiyey, ayaa dib u midoobay ka dib markii ay qaateen xornimo sanadkii 1960. Jamhuuriyadii Soomaaliya waxay gashay dadaal dheer sidii ay dib ugu soo celin lahayd qaybaha Soomaaliyeed ee maqan, waxaana sanadkii 1977 xornimo qaatay Jabuuti oo Canfar wehiliso, waxaana adkaatay in ay ku biirto Soomaaliya maadaama uu dalku kala dhexeeyo qoomiyado kale oo asal ahaan aan Soomaali ahayn.
Ogadeeniya, oo ah qaybta ugu balaadhan uguna muhiimsan dhulka Soomaaliyeed waxay reer Yurub gacanta u galiyeen Itoobiya sanadkii 1897. Waxaana ka dhacay Ogadeeniya dagaalada ugu taariikhda dheer uguna adag dunida ee la xusuusto, dagaaladaas oo abuuray in 80% dadka Soomaalida Ogadeeniya ay qaxooti ku noqdaan dalalka dariska ah iyo dunida inteeda kale.
In kasta oo halgan dheer oo xornimo doon ah loo soo galay dalka Ogadeeniya, hadana halganka ugu taariikhisan uguna muhiimsan ee ay galaan shacabka Soomaalida Ogadeeniya waa midka ay hormuudka ka tahay JWXO oo wali meeshii ugu wanaagsanayd maraya. Magaca JWXO oo ka kooban yahay afar xaraf oo ku dhisan afar qodob oo astaan u ah halganka gobonimo doonka ee ay JWXO wado, kuwaas oo kala ah ah; Isku-tashi, Midnimo, Mintid, Guul iyo Gobonimo, Allahu Akbar.
JWXO, waxay gaadhsiisay halganka gobonimo doonka ee ay horseedka ka tahay heer caalami ah, waxayna baday gumaysiga Itoobiya xanuun iyo in uu ku ladi waayo gayiga Soomaalida Ogadeeniya. 34 sano ee ay jirtay JWXO waxaa ka hor yimid dhibaatooyin xoog leh oo kaga imanayay cadowga la yaqaano iyo midka aan la aqoonin oo qarsoodi ahaa, kuligoodna way ka adkaatay. Maanta JWXO waxay gaadhay guul siyaasadeed oo kaliftay in taliskii TPLF ciida afka loo daro.
Cadowga layaqaan ee ay JWXO ka adkaatay waa Gumaysiga Itoobiya. Xeelad kasta oo ay adeegsato Itoobiya iyo cid kasta oo u adeegta waxaa adkaatay in ay ka guulaysato JWXO oo waxa ay u dagaalamaysaa yahay dadkeeda iyo dalkeeda inay xornimo iyo madax banaani waarta gaadhsiiso, kuwaas oo ku jiray cidhiidhi iyo cabsi aan lasoo koobi karin.
Shaki kuma jiro in JWXO ka adkaatay Gumaysiga Itoobiya, laakiin waxaan wali dhiman qorshihii dheeraa ee aayo katalinta shacabka Soomaalida Ogadenya. Waxaana maanta socota in JWXO ay rajo wanaagsan ka qabto in si nabadgaliyo ah lagu xalliyo dhibaatada haysatada shacabka Soomaaliyeed. JWXO, go,aankeeda xornimo doon ma aha mid ku xidhan dagaal ay wado sanooyin, mana aha mid ku xidhan maamul iyo dhaqaale ay Itoobiya bixiso, laakiin waa xoriyad taam ah iyo aaya ka tashi uu helo shacabka Soomaalida Ogadeeniya.